QUBANAHA TODDOBAADKA: Gabdhaha Hindiya oo labarayo sideey kufsiga iskaga difaaci lahaayeen | Somaliska
Shan sanno ayaa ka soo wareegtay markii ardayad caafimadka barata ay koox dhalinyarro magaaladda New Deldi ee dalkaasi Hindiya ugu geeysteen kufsi una dhimatay markii dambe dhaawacii ka soo gaaray. Falka foosha xun ee gabadhaasi 23-jirka aheyd lugula kacay, wuxuu dalka Hindiya ku reebay mahadho iyo carro xoogan oo ka dhashay.
Haatan oo ay ka soo wareegtay dhacdadasi shan sanno weli waxaa taagan cabsi xoogan oo ay gabadhaha dalkaasi ka qabaan in ragga waraabaha ah ay kufsi u geeystaan. Sanadkii 2015-kii ayaa la diiwaan geliyey 32.651 fal oo kufsi, halka 2113 ka mid ah falkaasi uu ahaa mid kufsi wadareed la geestay. Sidaasi waxaa shaaca ka qaaday hey’adda National Crime Records Bureau oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in shan iyo tobban-kii daqiiqo uu dalkaasi dhaco kufsi gabar loo geeysto, halka daqiiqadiina ay dhacdo fal ceynkaas oo kale ah oo lugula kaco gabdhaha yar yar.
Iskuulo ku yaala dalkaasi ayaa haatan bilaabay ollole ay ku barayaan gabdhaha waxa loo yaqaano difaaca nafsad ahaaneed, kaas oo ah hab ay iskaga difaacayaan ragga isku daya ineey kufsi ugu dhaqaaqaan. Waana mid ay u riyaaqeen gabdhaha da’da yar ee dhigta dusiyadda sare ee dalkaasi gaar ahaan gobolka News Delhi.
Garsoorka dalka Hindiya waxaa inta badan la tiriyaa inuu yahay mid kala daadsan siyaaasad ahaana iskuma raacsana dalku qaabka loo wajahayo kufsigan xadka ka baxay ee soo laa laabtay ee gabdhaha. Bal waxaaba la oran karaa wuxuu kala qeybiyey dadka dalkaasi.
Iskuuladda haatan bilaabay ollolahan ayaad u soo dhaweeyey fikirkan gabdha lugu barayo sideey isku difaaci lahaayeen. Kacdoonka #metoo loogu magac daray ayaa isna la filayaa in uu ku soo kordhin doono talaabo wax ku ool ah oo ugu yaraan daaha ka rogi doona cid kasta oo kufsi u geeysta dumarka dalkaasi.